Iyo ProForm treadmill brand zita rinogadzirwa neICON Hutano nekusimba. ICON Hutano uye Kusimba ikambani yakavakirwa kunze kweUtah inotarisa mukugadzira zvekushandisa zvekushandisa. ICON Hutano & Kusimba ine zviyero zvinoverengeka zvekutsika tsika kusanganisira NordicTrack, Healthrider, uye Freemotion. Iwe uchacherekedza kuti treadmill mayuniti kubva kune yega yega mhando yakafanana chaizvo kana iwe uchienzanisa mamodheru kubva kune yega brand.
ProForm ine dzakasiyana treadmill mitsara yegore ra2016. Iyo Power Series inoratidzira matreadmill anodhura $ 999 kusvika $ 1999. Steeper inoteedzera inosanganisirwa muPRO Series uye iyo Boston Marathon Series zvisinei izvi zvikamu zviri kuzodhura zvakanyanya. Boston Marathon Treadmills ndiwo epamberi michina yeProForm. Izvi zvinoitirwa vatambi vanomhanya kwemaawa panguva.
Marathon treadmills ndiyo inodhura zvikuru ProForm. Izvo zvine simba uye zvinogadzikana zvakakwana kuti zvitsigire mamiriyoni emamiriyoni emamiriyoni. Zvinosanganisira mapurogiramu ekudzidzira marathon kune vanotanga kuwedzera kune vatambi vepamusoro. Vadzidzisi ve Boston Marathon Treadmill inogona kusangana nekugadzirisa cushioning, otomatiki kurerekera uye kudonha, pamwe neepamusoro-tsananguro vhidhiyo yekushandira iyo yakadhirowewa muBoston nhangemutange kosi. Iko kurovedzwa kunoratidzwa pane gumi ″ kara yekubata.
ProForm inogadzira yakasarudzika tafura yekutsika. Iwo tafura yekutsika mamodheru ndiyo ProForm Thinline uye ProForm Thinline Pro. Izvi zvigadziriswa zvigoni zvinogona kushandiswa nekombiyuta yako kana kombiyuta.
Iyo ProForm Sport Series inogutsa vanhu vanotsvaga zvakachipa zvekushandisa zvekushandisa. Mazhinji emadhodhi ari makumi matanhatu-kureba uye yega yega yekutsika ndiyo SpaceSavers. SpaceSaver treadmill inogona kupetwa yakatwasuka kuti iwedzere nzvimbo yepasi. Iyo Proform Sport Series yekutsikirira ine maxium inoteedzera ye60% uye iFit inogoneswa. Iyo iFit nhengo asi zvakadaro inotengeswa zvakasiyana. Ma motors eaya matanho ekutsika anotangira kubva pa12 kusvika pa2.75 HP.
Iwo marongero ezvikamu izvi akapfupika kuti iwo akanyanya-ekupedzisira maProform mamodheru. Mazhinji emadhodhi pane akateedzana mashandiro ari makumi mashanu nemashanu pakureba. Aya matanho ekutsikirira anogona kubva pamadhora mazana mana kusvika mazana masere emadhora. Kazhinji garandi yezvikamu izvi igore rimwe zvikamu uye gore rimwe rebasa.
Iyo ProForm Pro Series inoratidza Proform inotungamira tekinoroji kunze kweMarathon treadmill lineup. Kune mana ekutsika-tsika mune dzino zvakateedzana. Ma motors eProform Pro akateedzana anotangira pa4 kusvika 3.5 CHP. Iwo Pro akateedzana matreadmill anoratidzira inoteedzera ye4.25% mukuwedzera kune -15% kuderera. Aya matanho ekutsikirira zvakare iFit inoenderana. Iyo inodhura kwazvo treadmill muPro yakateedzana ndiyo Pro 3 yekutsika. Iyo Pro 900 treadmill ichangobva kuvandudzwa yegore ra900 uye inoratidzira 2016-touch screen.
Chinhu chakanaka pamusoro peProform ndechekuti ivo vanopa ekutsikisira matanho kuti akwane chero bhajeti. Mitengo inotangira pamadhora 399 kusvika $ 3999. Kana iwe uri mumhanyi anofarira, unogona kusarudza yakakosha modhi kana chimwe chinhu chakanatswa. Mazhinji mapuromendi ekutsika eProform anogona kupetwa kumusoro. Bhandi nyowani dzaProform nyowani dzekutsikirira dzakanyatso chengetedzwa kudzora kushamisika. Mimwe yemhando dzinodhura dzinotokutendera kuti udzivise kumisikidza kutevedzera yekunze kudzidziswa. Proform sevhisi yebasa inosiyana tani. Ye marathon treadmill inogona kuvhara zvikamu zvinosvika pamakore matanhatu. Mamwe mabhajeti ane hushamwari mamodheru asi anongouya chete nemazuva makumi mapfumbamwe-evashandi garandi saka ita shuwa kuti iwe unoita rako rechikoro usati wafunga kutenga Proform treadmill.